မော်ဒယ်နံပါတ်. P40211200 Material Main cabinet: အစိုင်အခဲသစ်သား;Marble top & ceramic basin Size Vanity size: 1200*560*428မီလီမီတာကြေးမုံအရွယ်အစား:600*40*1200mm ပန်းချီအမေရိက Valspar Huarun ပန်းချီကား.7ပန်းချီလွှာ။;အစွန်းအထင်း ; ထုပ်ပိုးကြေးမုံ, သီးခြားစီကက်ဘိနက်နှင့်စကျင်ကျောက်ထုပ်. 1)ကြည့်မှန်: ပထမ ဦး ဆုံးအတွင်းပိုင်း EPE, နှင့်အတူ6ဘေးထွက် 2cm အထူမြှုပ်စံ5အတွင်းပိုင်း ...
မော်ဒယ်နံပါတ်. P40211000 Material Main cabinet: အစိုင်အခဲသစ်သား;Marble top & ceramic basin Size Vanity size: 1000*550*428မီလီမီတာကြေးမုံအရွယ်အစား:1000*40*700mm ပန်းချီအမေရိက Valspar Huarun ပန်းချီကား.7ပန်းချီလွှာ။; အစွန်းအထင်း ; ထုပ်ပိုးကြေးမုံ, သီးခြားစီကက်ဘိနက်နှင့်စကျင်ကျောက်ထုပ်. 1)ကြည့်မှန်: ပထမ ဦး ဆုံးအတွင်းပိုင်း EPE, နှင့်အတူ6ဘေးထွက် 2cm အထူမြှုပ်စံအတွင်း၌ ...
မော်ဒယ်နံပါတ်. FQ6561200 Material Main cabinet: အစိုင်အခဲသစ်သား;Marble top & ceramic basin Size Vanity size: 1200*560*860mm ပန်းချီအမေရိက Valspar Huarun ပန်းချီကား.7ပန်းချီလွှာ။; ထုပ်ပိုးကြေးမုံ, သီးခြားစီကက်ဘိနက်နှင့်စကျင်ကျောက်ထုပ်. 1)ကြည့်မှန်: ပထမ ဦး ဆုံးအတွင်းပိုင်း EPE, နှင့်အတူ6စံအတွင်း၌ဘေးထွက် 2cm အထူမြှုပ်5အလွှာပုံး; wood frame…
123နောက်>...15 စာမျက်နှာ 1 ၏ 15